Kitra – «CJSOI 2016» : hifandona amin’ny Barea ny Club M, anio | NewsMada
Kitra – «CJSOI 2016» : hifandona amin’ny Barea ny Club M, anio
Hotanterahina, anio etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny lalao manasa-dalana hiadiana ny medaly volamena, amin’ny CJSOI, taranja baolina kitra. Raha ny fandaharam-potoana, hifandona amin’ny Barea de Madagascar ny Club M Maorisy ary La Réunion indray, hifanazava amin’i Mayotte.
Raha tsiahivina ny lalao fifanintsanana isam-bondrona farany, natao omaly, nivoaka nandresy tamin’ny isa mazava, 3 noho 1, nanoloana an’i Mayotte, ny Barea. Nitarika tamin’ny isa 1 noho 0 ry zareo Mahorezy vao nanenjika ny Barea. Nosahalain’i Tahiry izany, fotoana fohy nialoha ny fialan-tsasatra ary mbola nampian’i Ando sy Tahiry indray teo amin’ny tapa-potoana faharoa. Nametraka ny Barea, teo amin’ny laharana voalohany tao amin’ny sokajy “B” nisy azy, io fandresena io. Nitana ny laharana faharoa kosa i Mayotte.
Tetsy ankilany, mbola nanamafy ny maha voalohany azy, tao amin’ny vondrona “A”, kosa ry zareo Renionezy, rehefa nandresy an’i Kaomoro, tamin’ny isa 2 noho 0. Baolina tafiditr’i Abner Alicia (23 mn) sy Nelle Melissa (50 mn).